बन पैदावारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र दिगो सदुपयोग गर्न आवश्यक छ
अहिले मुलुकमा नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न राज्यस्तरबाट भईरहेको छ । नयाँ संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न संभावना एबं अवसर खोज्ने क्रम पनि बढेको छ । यसका लागि विभिन्न तहमा विभिन्न प्रकारका छलफल र बहस्हरु पनि चलिरहेका छन् । जल, जंगल, जमिन र जनशक्तिको भरपूर सदुपयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रयाशहरु पनि भईरहेका छन् ।
तर बेला बेलामा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोगका विधि एबं प्रक्रियाका सन्दर्भमा केही मतभेदहरु समेत हुने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बृहतरुपमा अध्ययन एबं छलफल समेत नहुदा आ आफ्नै प्रकारको बुझाई रहने गरेको छ । आज श्रावण १५ गतेको कान्तिपुरमा जडिबुटि ८ वर्ष देखि नाकामै भन्ने शिर्षकको समाचारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम शर्माको भनाईका विषयमा गरिएको कुराकानी यस्तो छ ।
अध्यक्षज्यू उक्त समाचारमा तपाईको भनाई पनि जोडिएको छ बास्तविक्ता के हो ?
– कान्तिपुरमा निक्लेको समाचारमा मेरो भनाई जोडिएर मैले बोल्दै नवोलेको कुरा आउदा म आश्चर्यमा परेको छु । सम्बन्धित पत्रकारले मलाई फोन गरेर सोध्नु भएको त थियो । उहालाई हाम्रो प्रदेशको कमिटि नया पनि भएको र सबैसंग चिनजान भइ नसकेकोले यस खालको कुरा पहिलो पल्ट तपाई बाट सुन्दै छु मलाई थाहा भएन भनेर फोनमा कुरा भएको थियो ।
– साथै पत्रकारले सोध्न खोजेको जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका स्थित स्यालापाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष विर बहादुर बस्नेतसंग चिनजान समेत नभएको र उहाको बारेमा मलाई कसैले पनि गुनासो समेत नगरेको जानकारी यस कुमाख दैंनिक अनलाइन खवर मार्फत गराउदछु ।
– पत्रकारले सोधेका विषयमा मलाई कुनै पनि कुरा थाहा भएन वास्तविक्ता नबुझि केहि बोल्न नमिल्ने भनिएको थियो तर पत्रिकामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदशेका अध्यक्ष घनश्याम शर्माले बस्नेतका गतिविधिबारे गुनासा आईरहेकाले बुझने बताए भनेर समाचार आउदा अचम्मित भएको छु । यसरी बोल्दै नवोलेको कुरा फरक भएर आउदा दुःख लाग्नु स्वभाविक हो ।
– बोलेको भन्दा फरक ढंगबाट पत्रिकामा आउनु भनेको पत्रकारीताको मर्म विपरित हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । यस खालका कुराहरुमा हामी सवैजना सजग रहनु जरुरि छ ।
यसरी नाकामा रोकिराखेको जडिबुटिका विषयमा तपाईको के भनाई रहेको छ ?
– बजारमा सुन्नमा आएको नाकामा मात्रै होईन नेपालका ग्रामिण भेगका किसान, ब्यापारिले संकलन गरेका जडिबुटि लामो समय देखि अलपत्र परेका छन । विभिन्न खालका जडिबुटीहरु कुहिएर, किराले खाएर नष्ट भएर गोदाममा थन्किएका छन । ती जडिबुटिलाई प्रयोग नगरि त्यतिकै राख्दा जो सुकै भए पनि नेपालीको पैसा नोक्सान भएको छ, त्यसले देशलाई घाटा लाग्ने हो । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने सबैको चासोको विषय हो र यसको उपयूक्त निकास निकाल्नु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
बहुमूल्य जडिबुटी खेर जान नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ ?
– कुनै पनि वन पैदावार दिगो ब्यवस्थापन मार्फत सदुपयोग गरि हामीहरु आयआर्जन गर्दै समृद्ध हुने हो । कुनै पनि वन पैदावारलाई टुलुटुलु हेरेर अभावमा बाच्ने होइन । त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धन र दिगो सदुपयोग गर्नू परयो । यो कुरा स्थानीय समुदायको सहभागितामा मात्र सम्भव रहेको छ । त्यसैले हामी सबैले उपभोक्ता मैत्री कानुन बनाई संघियताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन तहमा जानु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । यसका लागि कर्णाली प्रदेशमा सबै सरोकारवालाहरु एकजुट भएर लाग्नु जरुरी रहेको छ ।
घरभाडा, बैंकको किस्ता, विद्युत, खानेपानीको महशुलमा छुट गर्न होटल व्यवसायीहरुको माग
सल्यान, २६ असार । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला भएको लकडाउनले आर्थिक तन्त्रमा धरासयी भएको भन्दै […]